Xiddig kale oo ka tirsan Juventus oo ku dhawaaqay inuu ka tagayo dhamaadka xiliciyaareed kaan – Gool FM
Xiddig kale oo ka tirsan Juventus oo ku dhawaaqay inuu ka tagayo dhamaadka xiliciyaareed kaan
Liibaan Fantastic May 18, 2018
(Torino) 18 Maajo 2018 Kooxda Juventus ayaa wajahaysa dhibaato kadib markii laacibkii 3-aad uu ku dhawaaqay inuu ka tagayo dhamaadka xiliciyaareed kaan.
Goolhaye Buffon iyo Stephan Lichtsteiner ayaa horay u shaaciyay inay ka tagayaan Juventus marka kooxdu ay ciyaarto kulankeeda ugu danbeeya xiliciyaareed kaan.
Laakiin waxaa si lama filaan ah haatan ku dhawaaqay inuu ka tagayo kooxda daafacooda Kwadwo Asamoah, wuxuuna sheegay in go’aankaas uu u qaatay qoyskiisa dartiis.
Kwadwo Asamoah ayaa yiri:
“Ma jiro hadal ama ficil lagu cabiri karo sida uu u adag yahay qaadashada go’aan kaan waayo waan ku faanayaa waqtigii aan ku qaatay halkaan, qof walba oo ka tirsan kooxda boos gaar ah ayuu ku leeyahay wadnahaga laga bilaabo tababare ilaa asxaabtayda kooxda oo laga gaaro shaqaalaha kooxda iyo taageerayaasha oo aad muhiim u ah”.
“Inkasta oo Juventus ay ii soo bandhigtay heshiis cusub, si isla waynin la’aan ah ayaan u qaatay inaan ka ciyaaro meel kale iyo koox kale, aad ayeey u adkaan doontaa mustaqbalka inaan ka hor imaado Juventus”.
“Qasab ayeey igu noqotay inaan qaato go’aan kaan, waxaan u qaatay kaliya maslaxada qoyskayga, waxaan rajaynayaa in taageerayaashu ay fahmi doonaan go’aankeyga”.
Waxaa jira warar sheegaya in laacibku uu aad ugu dhawyahay kooxda Inter Milan.
Aubameyang, Mkhitaryan iyo Ozil oo ka soo muuqday labiska Arsenal oo si qarsoodi ah loo faafiyay
Taariikhda Koobka Adduunka oo Kooban…(QEYBTA SIDEDAAD)+SAWIRRO